Semalt: Inona no fiteny fandaharana tsara indrindra mba hanefana tranonkala iray?
Teknika momba ny fanesorana fampahalalana avy amin'ny toerana samihafa. Ny rindrambaiko amin'ny tranonkala dia miditra amin'ny aterineto na amin'ny alalan'ny tranonkala na amin'ny alalan'ny Hypertext Transfer Protocol. Ny famafazana tranonkala dia matetika ampiasaina amin'ny fanampiana ireo robots automatique na web crawlers. Mivezivezy amin'ny tranonkala samihafa izy ireo, manangona tahirin-kevitra ary manaisotra azy araka izay takian'ny mpanjifa. Ny votoatin'ny tranonkala iray dia novolavolaina, novaina ary nodinihina, raha ny kopiana angon-drakitra alaina dia aseho amin'ny alàlan'ny torolàlana feno araka ny torolalana.
Nisy tranonkala iray natsangana tamin'ny tenim-piraketanana mifototra amin'ny lahatsoratra toy ny HTML, Python, ary XHTML. Izy io dia mirakitra ny harenan'ny fampahalalam-baovao ary noforonina ho an'ny olombelona, ​​fa tsy baraingotra bota. Na izany aza, fitaovana maoderina hafa dia afaka mamaky ireny pejy ireny tahaka ny olombelona ary mahazo fampahalalana mahasoa ao amin'ny format CSV na JSON.
An'i Python ve ny tranonkala tsara indrindra?
Python dia fitenim-paritra iray izay manolotra "shell" mba hanakanana ny angona amin'ny endritsoratra tsotra. Manampy ireo mpampiasa misintona vaovao avy amin'ny tranonkala samihafa. Python dia mahasoa rehefa manapa-kevitra ny hametaka ny data ny mpizara dizitaly na mpandrindra. Amin'ny alalan'ity fiteny ity dia afaka miditra mora foana ny laharan-tsoratra ary jereo ny fomba hikapohana ny angona. Na izany aza, Python dia tsy fiteny tsara indrindra amin'ny tranonkala.
Manana safidy ilaina an-jatony natao hanavotana ny fotoantsika i Python. Ohatra, malaza eo anivon'ireo manam-pahaizana momba ny fikarohana akademika sy ny data. Python dia mahatonga antsika mora amin'ny fikarohana ny angon-drakitra ilaina sy ny oniversite amin'ny aterineto. Saingy raha ny momba ny fanalana ny tranonkala dia tsy mahomby toa an'i C ++ sy PHP i Python. Python dia fanta-daza amin'ny fanohanana ny fanorenana azy ary mamonjy ireo angona amin'ny endrika mahazatra toy ny JSON sy ny CSV.
Ny fiteny fanandramana tsara indrindra ho an'ny tranonkala:
Mazava izao fa Python no tsy mahay teny anglisy. Fa kosa, maro ny mpandrindra ny programmers sy ny mpahay siansa ny tian'ny C ++, Node. js, ary PHP amin'ny Python.
Tsara ny manasitrana sy manaparitaka toerana samihafa. node. js dia mety amin'ny tranokala dynamika ary manohana ny fisiahana amin'ny aterineto. Ity fiteny ity dia ilaina amin'ny fampiasana rakitra matevina amin'ny tranonkala fototra sy avo lenta.
C ++ dia manatontosa asa goavana sy mahomby. Tsara kokoa noho ny Python io fiteny io ary manome vokatra tsara. Na izany aza, tsy voatery ho an'ny orinasa noho ny fehezan-dalàna sarotra.
PHP no fiteny tsara indrindra amin'ny tranokala. Tsy toy ny Python sy C ++, PHP dia tsy mamorona olana rehefa mandamina ny asany sy manaparitaka votoaty avy amin'ny tranonkala samihafa. Tahaka ny mpanelanelana rehetra izy io ary mitantana ny ankamaroan'ny tetikasan-tsakafo sy tetikasam-pejy ao amin'ny aterineto. Import. io sy ny Kimono Labs dia ireo fitaovana maoderina mahery mifototra amin'ny PHP. Manana endri-javatra lehibe izy ireo ary afaka manasitrana pejy maro amin'ny aterineto mandritra ny adiny iray na roa. Mampalahelo fa tsara ny sipo mahafinaritra sy Scrapy (izay mifototra amin'ny Python) dia tsy manome fanohanana toy ny PHP-based data extraction tools.
Ankehitriny dia mazava fa manana ny tombony sy ny tsy fahampiana ny tenim-pirenena rehetra. PHP, na izany aza, dia tsara kokoa noho ny Python ary izy no fiteny tsara indrindra amin'ny tranonkala. Izy io dia manome fitaovana tsara kokoa ho an'ny mpampiasa ary afaka mitantana tetikasa mora foana Source .